China SK33 SK34 Fireclay Brick abakhiqizi nabaphakeli |Amandla
Izitini ze-Fireclay ziyi-alumina silicate izitini ezine-refractoriness ye-SK 32-34 futhi ziqukethe i-35- 45% i-alumina.Yenziwe ngobumba lomlilo, i-chamotte eqoshiwe, i-mullite njll. imihuzuko kanye nokukhasa.
Izitini ze-Fireclay ziyi-alumina silicate izitini ezine-refractoriness ye-SK 32-34 futhi ziqukethe i-35- 45% i-alumina.Yenziwe ngobumba obuvuthayo, i-calcined chamotte, i-mullite njll. i-abrasion and to creep.Izitini ze-Fireclay, ezaziwa nangokuthi izitini ezi-sintered, zingenye yezinto zokwakha ezindala kakhulu emhlabeni.
Ukumelana nokushisa okuphezulu komlilo ngaphansi komthwalo / Ukwanda okushisayo okuphansi emazingeni okushisa aphezulu / Okuqukethwe kokungcola okuphansi
Ukumelana nokushaqeka okuhle okushisayo / I-slag enhle kakhulu kanye nokumelana nokuhuzuka / Amandla amahle okucindezela okubandayo
Izitini ze-Fireclay zisetshenziswa kakhulu kuhhavini we-coke, i-glass kiln, i-rotary kiln kasimende, i-lime kiln, zonke izinhlobo ze-incinerator, isithando sokushisa, njll.
Ushintsho lomugqa olungunaphakade @1400ºC*2hrs(%)
Ukunwetshwa komugqa oshisayo @1000ºC
I-Refractoriness ngaphansi Komthwalo (ºC)@0.2MPa
Ukuhlaziywa Kwekhemikhali (%) I-Al2O3
Isitini se-Fireclay, esaziwa nangokuthi isitini esi-sintered, siyinto encane yokwenziwa yebhulokhi yokwakha.Isitini se-Fireclay senziwa ngobumba (okuhlanganisa i-shale, i-gangue yamalahle nezinye izinto eziyimpushana) njengempahla eluhlaza eyinhloko, ephathwa ngodaka, ukwakheka, ukomiswa nokugazinga, ngokuqinile nokungenalutho ngokulandelana.
Cindezela isenti lembobo: isitini esiqinile (awunayo imbobo noma isitini esinezinga lembobo ngaphansi kuka-25%), isitini esinezimbobo (isilinganiso somgodi silingana noma ngaphezu kuka-25%), ubukhulu bembobo buncane futhi isitini sinokuningi. inani, elivame ukusetshenziswa endaweni yokuzala, izinga lokuqina liphakeme.Isitini esingenalutho (izinga lembobo lilingana noma lingaphezulu kuka-40%, ubukhulu bomgodi bukhulu kanye nenani lezitini, ezivame ukusetshenziselwa izingxenye ezingathwali, izinga lamandla liphansi).
Izitini eziqinile nezimbobo zisetshenziswa ekuthwaleni umzimba odongeni lwesakhiwo ngaphezulu, isitini esingenalutho sisetshenziswa njengecala elithwala umzimba wodonga lwesakhiwo ngaphezulu.
Okwedlule: Isitini se-graphite
Olandelayo: i-refractory castable
Izitini ze-Fireclay zihlukaniswe zibe izitini ezivamile ze-fireclay, izitini eziphansi ze-fireclay, izitini eziphansi ze-fireclay nezitini ezinkulu ezingaphansi ze-fireclay zokushisa ingilazi.
UZENZA KANJANI IZITHUTHI ZOKUTHUTHA KWANELE?
I-Logistics idlala indima ebalulekile ekukhangiseni nasebhizinisini lamaRefractories ethu.Indlela yokwenza izinto zokuhamba Ziphephe ngokwanele?Indlela yokunciphisa Izindleko zokuhamba ngesikhathi esiphezulu?Sifinyeza Kanjani isikhathi sezokuthutha?….yilokhu kuphela okufanele sikucabange ngakho futhi sizama ukuthola indlela yokukuxazulula.Umgomo wethu ukuthi Sisebenzela ukwaneliseka kwakho futhi sidlule okulindele!
Isitini esiphezulu se-Alumina